2012-06-10 ~ Myanmar Express
From : နာရိဈရဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့နဲ့ ဇွန် ၁၅ ရက်အကြား ညဉ့် ၁ နာရီမှာ စစ်တွေ မြို့သူကြီး ရပ်ကွက် (ခေါ်) ရွေပြား ရပ်ကွက်ကို မွတ်ဆလင် တချို့က ၀င်ရောက်မီးရှို့တဲ့ အတွက် နေအိမ် (၆) လုံးမီးထဲ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အိမ်ကို သူတို့ မီးလာရှို့ပြီး အသင့်စောင့်နေတဲ့ စက်လှေနဲ့ ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တရားသီးစု ရပ်ကွက် လမ်းပေါ်မှာ ကင်းယူနေတဲ့ ရခိုင် လူငယ် (၇) ဦးကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတာ ခုချိန်ထိ ပြန်မရောက်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ မောင်တောမှာတော့ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်က ဗလီမှာ ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ လာတဲ့ လူ ၅ ဦးပါ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ကို ရဲက မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီး ဟန့်တားတဲ့ အတွက် လူစု ခွဲပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မောင်တောမြို့ပြင် မြို့သူကြီး ရပ်ကွက်မှာတော့ စစ်သားတွေ အလုံးအရင်း ရောက်နေပြီး တပ်ဖြန့်ချထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ သောကြာနေ့ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆူပူမူတွေ ထပ်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် အခုလို လာရောက်ကြတာ ဆိုတာကတော့ သဲကွဲစွာ မသိရသေးပါဘူး။ ————– ————————————– ဒီကနေ့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့က ထုတ်တဲ့ The Daily Star သတင်းစာမှာ Myanmar Claims Jammat Link ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်ပါလာပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ပါလီမာန်မှာ နိုင်ငံခြားရေ ၀န်ကြီး ဒီပူရ် မူနီက မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ပါလီမာန်မှာ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ ပြဿနာကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဘာသာရေး ပါတီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျာမတ် အီစလန်မစ် အဖွဲ့က ဘင်္ဂလာမှာနေထိုင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်နက်တွေ ကူညီပြီး ဆူပူအောင် လုပ်တယ်ဆိုပြီး မြန်မာ အစိုးရက စိုးရိမ်ကြောင်း သူနိုင်ငံရဲ့ သံတမန်တွေကို ထုတ်ဖေါ် ပြောတယ်လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ အခုလို ပြောဆိုတာတွေ ရှိနေတဲ့ သူ့နိုင်ငံ လုံခြုံရေး အတွက် ထွက်ပြေးလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကို လုံးဝ လက်ခံလို့ မရဘူးလို့ ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ်။ ကော့စ်ဘဇားခရိုင်မှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်ရွာတွေမှာ လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ်ထားပြီး ရခိုင်တွေကို ဒီကနေ့မှာ အိမ်ပြင်ကို မသွားလာဖို့ ရဲအဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဈေးဆိုင်တွေကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ သောကြာနေ့ ၀တ်ပြု အပြီးမှာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ဆန္ဒပြဖို့ ခွင့်တောင်းတာကို ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကော့စ်ဘဇားမှာ အခြေအနေဟာ ငြိမ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘင်ဒရိုဘင် ခရိုင် နတ်ကျောက်ဆရီမြို့နယ် အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ရွာတွေမှာတော့ ရွာကို စွန့်ခွာသွားတဲ့ ရခိုင်တွေ ရှိသလို အများစုကတော့ သတိနဲ့ နေထိုင်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Myanmar Express
လှုဒါန်းနိုင်တဲ့နေရာများ ထပ်ဖြည့်ပေးပါရန်နှင် share ပေးကျပါရန်အနူးအညွတ် တောင်းဆိုပါသည် (ရန်ကုန်အခြေစိုက် မြန်မာလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့များသည် သဘာဝဘေးဒဏ်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများကြုံလာတိုင်း စုပေါင်း၍ အများအားဖြင့်ကူညီခဲ့သည့်အလေ့အထများရှိပါသည်။ ယခုအခါ ရခိုင်မီးဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် လိုအပ်ချက်များရှိနေသည်ကိုသိရသည့်အတွက် လူငယ်အဖွဲ့များ စုပေါင်းကူညီပါမည်။အောက်ပါလူငယ်အဖွဲ့တာဝန်ခံများကိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။မတင်မြတ်ထက် (myanmar youths in action) ၀၉၇၃၁၁၇၈၄၉ကိုသန့်ဇင်စိုး ( myanmar storytellers) ၀၉၄၂၅၀၁၈၄၇၆ကိုဇင်ဖြိုးထက် ( voluntary internship program) ၀၉၅၀၄၁၆၄၇ကိုခိုင်စိုးလင်း (myanmar youths in action) ၀၉၅၄၀၈၃၀၅ကိုဇော်လွင်ဝင်း ( mutd) ၀၉၄၃၁၁၃၃၉၀ကိုသီရိစု (BAD boys) ၀၉၅၁၁၉၈၂၈) (ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများအတွင်း အိုးအိမ်ဥစ္စာများ ပျက်စီးရှူံးသွားရသော ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေများအား ရခိုင်အသင်း(စင်္ကာပူ)သို့ထည့်ဝင်ပေးလှူဒါန်းရန်အတွက် သဒ္ဒါတရားနည်းများမဆို လှူဒန်းလိုသော မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆက်သွယ်၍လှူဒန်းနိုင်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ကျော်သူစိုး . - 8337 3123သီဟမောင်မောင် - 9003 5845လှလွန်းဆွေ - 9230 0580 .) (ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေသော ပြည်သူများကို ကူညီထောက်ပံ့ရန်အတွက် ဒေသခံများဖြင့် ယာယီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ကို လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (စစ်တွေ) ဖုန်း ၀၄၃-၂၂၄၇၅, ဦးမောင်ထွန်းကျော် ၀၉၈၅၀၀၉၄၄၊ ဦးသန်းရွှေ ၀၉၈၅၀၀၂၄၁၊ ဦးရွှေထွန်းအောင် ၀၉၈၅၀၀၅၉၀၊ ဦးအောင်ကျော်ဇံ ၀၉၈၅၀၀၄၅၀ များသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။) Myanmar Express
နောက်ဆုံးရ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဓာတ်ပုံများ (၁၆-၀၆-၂၀၁၂)